अख्तियारसहित संवैधानिक निकायमा कुल ४५ पद रिक्त, कहाँ, कति छन् रिक्त पदाधिकारी ?
बुधबार १ पुस, २०७७
काठमाडौँ । संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी पदपूर्तिका विषयमा लामो समयपछि औपचारिक रूपमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । प्रायः आयोगहरूमा पदाधिकारी रिक्त भए पनि लामो समयदेखि छलफल हुन सकेको थिएन । परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रक्रियामा छलफल हुन सकेको थिएन ।
मङ्गलबार बिहान बसेको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि बैठक गणपूरक सङ्ख्या अभावमा औपचारिक रूपमा कार्यसूचीमा प्रवेश भएको थिएन । गत शुक्रबार पनि सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुने भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
कति रिक्त छन् पदाधिकारी ?
नयाँ संविधान जारीपछि थप भएका संवैधानिक निकायमध्ये कतिपयले पहिलोपटक समेत पूर्णता पाएका छैनन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पछिल्लो समय अध्यक्षसहित चारै सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि संवैधानिक निकायमा कुल ४५ पद रिक्त भएको छ । गत असोजमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त भएको थियो । यस्तै, हाल अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्तको स्थान रिक्त छ ।
निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्तको पद रिक्त छ भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा नेतृत्व भए पनि चार सदस्यको स्थान रिक्त छ । महिला आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचै पदाधिकारीको स्थान रिक्त छ । राष्ट्रिय दलित आयोग पनि पदाधिकारीविहीन छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ ।
यस्तै, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्यको स्थान रिक्त छ । आदिवासी जनजाति आयोग पदाधिकारीविहीन छ । मधेसी आयोगमा अध्यक्ष भए पनि चार सदस्यको स्थान रिक्त नै छ । यस्तै, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भए पनि चार÷चार सदस्य नियुक्त हुन सकेको छैन । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।